रजनीकान्तले लिए राजनीतिबाट सन्यास
प्रकासित मिति : २८ असार २०७८, सोमबार प्रकासित समय : १९:२८
भारत । साउथका सुपरस्टार रजनीकान्तले राजनीतिबाट सन्यास लिएका छन् । उनले, सोमबार राजनीतिक पार्टी ‘रजनी मक्कल मन्द्रम’ विघटन गरेका हुन् ।
रजनीकान्तले भविष्यमा राजनीतिमा फर्किने आफ्नो कुनै पनि सोच नभएको बताएका छन् । उनले, यो फैसला पार्टीका सबै नेताहरुसँग छलफल गरेपछि लिएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।
उनले, सो समयमा एक पत्र लेख्दै राजनीतिमा नउत्रिएपनि जनताको सेवा भने निरन्तर गर्ने उल्लेख गरेका थिए । उनले, यो फैसलाबाट आफ्ना फ्यानहरु निराश भएपनि आफूलाई माफ गरिदिन आग्रह गरेका छन् । रजनीकान्त केही दिन अगाडि मात्र अमेरिकामा उपचार गरेर फर्किएका थिए । उनलाई डाक्टरले एक्सनका दृश्य नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
शिल्पाका पतिलाई १४ दिन न्यायिक हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री शिल्पा सेट्ठीका पति तथा व्यवसायी राज कुन्द्रालाई मुम्बईको एक अदालतले
पुरुषहरुले लामो समयसम्म सेक्स गर्न,यी टिप्स उपनाउनुहोस् ?
काठमाडौं। लामो समयसम्म सेक्स गर्न पुरुषहरुले के गर्नुपर्छ ? आउनुस् यसबारे केही जानकारी लिनुस्।